Yini enye engcono kunalokhu inkomishi yekhofi ekuseni? Lena ngenye yama-iziphuzo ozithandayo. Nokho, akulula kanjalo ukupheka kahle, njengoba kwenziwa e nemishayo, zokudlela kanye ezitolo zekhofi. Ngokuqondene nalokhu esiphuthumayo kakhulu kuba ukuthengwa imishini ekhethekile, okuvumela ikhaya ukulungiselela lesi siphuzo ezingeni okhokhelwayo. Operating Imiyalelo DeLonghi ikhofi umenzi impela ezingabizi futhi ikuvumela ukuba ngokushesha sifunde ikhono lokubuza idatha.
Yini odinga ukuyazi ngaphambi kokuba uqale
Ngaphambi kokuba uqale ukusebenza nalaba noma kwamanye amadivaysi, kubalulekile ukukhomba amaningana abalulekile. Operating Imiyalelo DeLonghi ikhofi umenzi izitshela ukuthi izinyathelo ezilandelayo.
ngenxa yokuthi ngesikhathi ukusebenza idivayisi likhipha eziningi ukushisa, akufanele ngqo eceleni kwakhe ukubeka yimaphi amadivaysi kagesi noma ezinye izinto okungezona ebucayi okushisa aphakeme ukuphi.
Umshini ikhofi akufanele ifakwe eduze empompini, ngoba avumele noma iluphi uketshezi isakhiwo. Kufanele siqinisekise ukuthi nomswakama egumbini akazange eqele ngalé kuyinsakavukela.
Ungayisebenzisi idivayisi kulezo amakamelo, lapho izinga lokushisa liphansi kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi ngenxa okokuqandisa yamanzi, okuyinto ukulayishwa zibe idivayisi, kungenzeka lilimele futhi elihunyushwa yaphela indaba yalo.
Uma wenza umenzi ikhofi endaweni ethile, ucabangele iqiniso lokuthi i kagesi lisebenze wire akufanele wring, zisondelene uthinte imiphetho ebukhali namakhona.
Ngaphambi oxhumanisa iyunithi eziko likagesi, qiniseka ukuthi lo voltage in amandla supply oluhambisana ukuthi elicacisiwe imiyalelo kanye kwilebula isilinganiso.
Okokuqala, ake khumbula ukuthi idivayisi entsha ingaqukatha iminonjana ikhofi ngaphakathi. Lokhu kungenxa yokuthi ifektri noma imuphi umshini sihamba isivivinyo.
Kakhulu banake kuya Isici nobulukhuni emanzini, ngoba kuthinta ukuqina lisebenze.
Amanothi bese eveza inhlukano ikhofi DeLonghi umenzi uncoma izinyathelo ezilandelayo uma ususebenza ngensimbi yomculo.
Xhuma iinsetjenziswa umthombo amandla predetermined voltage ezingeni;
Okulandelayo, khetha ulimi lokusebenza, ezizosetshenziswa esikhathini esizayo.
Isinyathelo esilandelayo ukugcwalisa ithangi lamanzi ekhethekile. Lapho senzo esithathwayo, isitsha kumele imiswe endaweni yokuqala.
Okulandelayo udinga uvule Ukushisa imodi. Lapho ukusebenza usuphothuliwe, qala amanzi ashisayo ku indebe.
Qaphela ukuthi okokuqala akunakwenzeka kuzuzwe umphumela egculisayo. Kuphela ngemuva kokuthi kuphekwe 5 izingxenye uhlobo isiphuzo ngamunye, kungaba izinga ijaji.
Kuyaphawuleka ukuthi lapho uqala ujike yedivayisi isikrini sayo kuyoba imikhondo mayelana ukulandelana izenzo.
Indlela ukulungiselela cappuccino kanye Latte
Operating DeLonghi Magnifica ikhofi umshini imfundo kuhlanganisa ikhomishana izinyathelo eziningana elandelanayo ukulungiswa ikhofi iziphuzo efana lattes futhi cappuccinos /
Into yokuqala ukulungisa fitcher bese ubeka inkomishi ngaphansi amashubhu, omunye esebenza ikhofi nobisi frothed.
Okulandelayo, udinga cindezela inkinobho oluhambisana isiphuzo sakho akhethiwe, kanye inkomba lizovela esikrinini ukulawula, ezovela ngokwezinga sabelo.
Nxa loluhlelo seluphelile, inkomishi ugcwele ubisi ezithile ngokwezinga foamed, ngemva kwalokho supply ikhofi uzoqala ngokuzenzakalelayo. Kule divayisi isicimile, futhi wena nje kufanele ushukela noma yimuphi omunye flavour.
Okwezomnotho amandla ukusetshenziswa
Ngenxa umsebenzi okhethekile, kungenzeka ukuchitha amandla kakhulu. Coffee umenzi DeLonghi EC 5, bhukwana imfundo ehambisana ukuqedela, ngokuvumelana eziningi izici kule modi wokusebenza. Ukuze ucindezele inkinobho isikhombisi phansi kuze kwesikrini ibonakala igama umsebenzi. Ngemva kokusebenzisa mode umnotho, kuyoba kutawucala kusebenta ngemnyaka we ncamashi 1 iminithi. Kufanele ikhumbule yokuthi uma kwenzeka amandla ukongiwa amandla, ukulungiswa yisiphi isiphuzo iqala kuphela ngemva kwemizuzwana embalwa ngemva ngokucindezela inkinobho ethile.
kusebenze Automatic futhi ukungaqaliswa
Kufanele uyinaka ikhono ukuze ujike ngokuzenzakalelayo ngaphakathi nangaphandle kwe-Google, esinikela ikhofi umenzi DeLonghi. Imiyalelo ec 9 inikeza incazelo eningiliziwe misebenzi.
Auto Amandla On likuvumela ukuze uqalise umshini ikhofi ngesikhathi esithile esilungele wena. Ukuze ukufakwa kwimenyu, ukhethe into efanele. Ngemva kwalokhu predetermined isikhathi nemingcele. Ngakho, ungaqiniseka ukuthi, ngokwesibonelo, ekuseni noma ukubuya emsebenzini kuzodingeka ulinde inkomishi yekhofi.
Okuzenzakalelayo livaleke-off konga amandla uma kwenzeka ukuthi umshini isikhathi eside ayenzi noma yisiphi isenzo. Ngokuzenzakalelayo, iyunithi amvalele phansi ngemva kwamahora angu-2 kusukela zokukhwabanisa zokugcina. Ungakwazi ngokwezifiso umshini ikhofi kuye ngezidingo zabo.
Ukukhetha ikhofi ukunambitheka
Operating DeLonghi EC 250 ikhofi umenzi inhlukano bayothola ulwazi mayelana kukhethwa ikhofi ukunambitheka ukushuba iziphuzo zakho. Ngokuzenzakalelayo, umshini isethelwe ezingeni evamile. Ungakwazi lilungiselele idivayisi i ultra-ekukhanyeni, sverhkrepky nokunambitheka okungefani Lesisemkhatsini.
inhlukano Operating DeLonghi Coffee yahlelwa ngolimi olulula futhi kufinyeleleke, ukuze ngesikhathi esifushane ngeke nguchwepheshe kuwo wonke amasu ukusebenza kule divayisi.
Izidakamizwa "Dysport" - izibuyekezo, izinkomba ukusetshenziswa, umphumela imijovo
Ubumbaxambili izwi - ukuthi lokhu umzimba
"Varikobuster" (ikhethelo varicose emithanjeni): ukubuyekezwa. Cream-namafutha "Varikobuster": Intengo